နော်စေးစေးထူးနဲ့ ယောကီးတို့ရဲ့ သရုပ်ဆောင်စွမ်းရည်တွေကို အကောင်းဆုံးပုံဖော်ပေးလိုက်တဲ့ ဒါရိုက်တာ တန်ခွန်ကျော်ရဲ့ ဗီဒီယိုလေး . . . - Myanmar People Alliance
နော်စေးစေးထူးနဲ့ ယောကီးတို့ရဲ့ သရုပ်ဆောင်စွမ်းရည်တွေကို အကောင်းဆုံးပုံဖော်ပေးလိုက်တဲ့ ဒါရိုက်တာ တန်ခွန်ကျော်ရဲ့ ဗီဒီယိုလေး . . .
မြန်မာအိုင်ဒေါ ဖြစ်ခဲ့ကြတဲ့ နော်စေးစေးထူးနဲ့ ယောကီးတို့ကတော့ အဆိုပညာပိုင်းမှာတင် ထူးချွန်ပြောင်မြောက်တာမဟုတ်ဘဲ သူတိုရဲ့ ထူးခြားတဲ့ သရုပ်ဆောင်စွမ်းရည်တွေကို တန်ခွန်ကျော်မှ အကောင်းဆုံးပုံဖော်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းကို..
“MMID မှာအဆိုပညာပဲ သင်ခွင့်ရခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူးဗျ သရုပ်ဆောင်မှုပိုင်းဆိုင်ရာပညာရပ်ကိုပါ သင်ကြားခဲ့ရတာပါ ကျွန်တော်တို့ မောင်နှမ ၃ယောက်ရဲ့ ဟာသ ဆန်ဆန် ရိုက်ထားတဲ့ videoလေးကို အားပေးကြပါဦးဗျ
ဒီဗွီဒီယိုလေးကို ကြည့်ပြီး တစ်နေ့တာအမောတွေ ပြေနိုင်ကြပါစေလို့ ဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ်ဗျ” လို့ တန်ခွန်ကျော်ရဲ့ လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
သူတို့ရဲ့ အနုပညာစွမ်းရည်ကိုချပြထားတဲ့ ဗီဒီယိုလေးထဲမှာဆိုရင် အိမ်ထောင်ကျပြီးနောက်ပြောင်းလဲသွားတတ်တဲ့ ယောက်ျားတွေ အကြောင်းကို နော်စေးစေးထူးနဲ့ ယောကီးတို့က အကောင်းဆုံး အတွဲညီညီသရုပ်ဖော်ထားပြီး တန်ခွန်ကျော်ကတော့ ဒါရိုက်တာအနေနဲ့ တာဝန်ယူထားတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
မောင်နှမ(၂)ယောက်ရဲ့ သရုပ်ဆောင်စွမ်းရည်ကို ချပြထားပြီး ဒါရိုက်တာတန်ခွန်ကျော် ရိုက်ချက်တွေကြောင့် ဗီဒီယိုလေးဟာဆိုရင် လက်ရှိမှာ ကြည့်ရှု့မျှဝေသူ များစွာဖြစ်နေပြီး ပရိသတ်တွေက (၃)ယောက်လုံးရဲ့ အနုပညာကို ထောက်ခံအားပေးနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဗီဒီယိုအတိုလေးပေမယ့် ဖြစ်တတ်တဲ့သဘောလေးတွေလည်း ပါဝင်နေတာမို့ လူကြည့်များနှစ်ခြိုက်အားပေးနေကြတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်. .။ ပရိသတ်ကြီးရေ မြန်မာအိုင်ဒေါ ဖြစ်ခဲ့ကြတဲ့ နော်စေးစေးထူးနဲ့ ယောကီးတို့ကတော့ အဆိုပညာပိုင်းမှာတင် ထူးချွန်ပြောင်မြောက်တာမဟုတ်ဘဲ
သူတိုရဲ့ ထူးခြားတဲ့ သရုပ်ဆောင်စွမ်းရည်တွေကို ဒါရိုက်တာ တန်ခွန်ကျော် ရိုက်ချက်တွေအောက်မှာ ချပြထားတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကို ဝေမျှလိုက်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးလည်း ဒီဗီဒီယိုလေးကို ကြည့်ရှု့အားပေးပြီး ဝေဖန်အားပေးစကားလေးတွေ မျှဝေပေးခဲ့ကြပါအုံးနော်။
ဗီဒီယို ရုပ်သံ ကြည့်ရန်
နျောစေးစေးထူးနဲ့ ယောကီးတို့ရဲ့ သရုပျဆောငျစှမျးရညျတှကေို အကောငျးဆုံးပုံဖျောပေးလိုကျတဲ့ ဒါရိုကျတာ တနျခှနျကြျောရဲ့ ဗီဒီယိုလေး . . .
မွနျမာအိုငျဒေါ ဖွဈခဲ့ကွတဲ့ နျောစေးစေးထူးနဲ့ ယောကီးတို့ကတော့ အဆိုပညာပိုငျးမှာတငျ ထူးခြှနျပွောငျမွောကျတာမဟုတျဘဲ သူတိုရဲ့ ထူးခွားတဲ့ သရုပျဆောငျစှမျးရညျတှကေို တနျခှနျကြျောမှ အကောငျးဆုံးပုံဖျောပေးခဲ့တဲ့အကွောငျးကို..
“MMID မှာအဆိုပညာပဲ သငျခှငျ့ရခဲ့တာ မဟုတျပါဘူးဗြ သရုပျဆောငျမှုပိုငျးဆိုငျရာပညာရပျကိုပါ သငျကွားခဲ့ရတာပါ ကြှနျတျောတို့ မောငျနှမ ၃ယောကျရဲ့ ဟာသ ဆနျဆနျ ရိုကျထားတဲ့ videoလေးကို အားပေးကွပါဦးဗြ.
ဒီဗှီဒီယိုလေးကို ကွညျ့ပွီး တဈနတေ့ာအမောတှေ ပွနေိုငျကွပါစလေို့ ဆန်ဒပွုလိုကျပါတယျဗြ” လို့ တနျခှနျကြျောရဲ့ လူမှုကှနျရကျ စာမကျြနှာမှာ ဖျောပွထားပါတယျ။
သူတို့ရဲ့ အနုပညာစှမျးရညျကိုခပြွထားတဲ့ ဗီဒီယိုလေးထဲမှာဆိုရငျ အိမျထောငျကပြွီးနောကျပွောငျးလဲသှားတတျတဲ့ ယောကျြားတှေ အကွောငျးကို နျောစေးစေးထူးနဲ့ ယောကီးတို့က အကောငျးဆုံး အတှဲညီညီသရုပျဖျောထားပွီး တနျခှနျကြျောကတော့ ဒါရိုကျတာအနနေဲ့ တာဝနျယူထားတာလညျး ဖွဈပါတယျ။
မောငျနှမ(၂)ယောကျရဲ့ သရုပျဆောငျစှမျးရညျကို ခပြွထားပွီး ဒါရိုကျတာတနျခှနျကြျော ရိုကျခကျြတှကွေောငျ့ ဗီဒီယိုလေးဟာဆိုရငျ လကျရှိမှာ ကွညျ့ရှု့မြှဝသေူ မြားစှာဖွဈနပွေီး ပရိသတျတှကေ (၃)ယောကျလုံးရဲ့ အနုပညာကို ထောကျခံအားပေးနကွေတာလညျးဖွဈပါတယျ။
ဗီဒီယိုအတိုလေးပမေယျ့ ဖွဈတတျတဲ့သဘောလေးတှလေညျး ပါဝငျနတောမို့ လူကွညျ့မြားနှဈခွိုကျအားပေးနကွေတာလညျး ဖွဈပါတယျ. .။ ပရိသတျကွီးရေ မွနျမာအိုငျဒေါ ဖွဈခဲ့ကွတဲ့ နျောစေးစေးထူးနဲ့ ယောကီးတို့ကတော့ အဆိုပညာပိုငျးမှာတငျ ထူးခြှနျပွောငျမွောကျတာမဟုတျဘဲ
သူတိုရဲ့ ထူးခွားတဲ့ သရုပျဆောငျစှမျးရညျတှကေို ဒါရိုကျတာ တနျခှနျကြျော ရိုကျခကျြတှအေောကျမှာ ခပြွထားတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုငျလေးကို ဝမြှေလိုကျပါတယျ။ပရိသတျကွီးလညျး ဒီဗီဒီယိုလေးကို ကွညျ့ရှု့အားပေးပွီး ဝဖေနျအားပေးစကားလေးတှေ မြှဝပေေးခဲ့ကွပါအုံးနျော။